छोराको आशमा सात छोरी
जुम्ला, २३ जेठ । जुम्लाको तिला गुफा नगरपालिकाका ६२ वर्षीय भक्तबहादुर बोगटी जुम्लास्थित कर्णाली प्रतिष्ठान अस्पतालमा पाँच वर्षीय छोरा विशाल बोगटीको उपचारमा छन् ।
घरनजिकैको स्कूल जाँदै गर्दा बाटोमा जङ्गली फल मचैनो खाँदा बिरामी भएका छोराको स्वास्थ्य अवस्था निकै चिन्ताजनक भएपछि उनी अस्पताल आइपुगे । अस्पतालमा उनले भने, “यो मेरो एक्लो छोरा हो । जसरी पनि बचाइदिनुुस् डाक्टर’साब । यो छोरो रहेन भने म पनि रहनेछैन ।”
उनले छोरा जन्माउनकै लागि सात छोरी जन्माए । उनले छोराको आसमा सात छोरी जन्माएको कथा सुनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सक दङ्ग परे । चिकित्सकले उपचार शुरु गरे ।
चिकित्सकको उपचारपछि उहाँका छोराको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रँदै गइरहेको छ । “अहिले खेल्न र बोल्नसक्ने भएको छ”, बोगटीले भने, “कर्णाली अस्पताल हुँदैनथ्यो त छोरो हुँदैनथ्यो, छोरो नहुँदा म पनि यो संसारमा हुन्नथेँ होला, छोरो बाँचेकामा धेरै खुशी छु ।”
उनका छोराको सघन उपचारकक्षमा उपचार भइरहेको छ । उनका अनुसार छ छोरी जन्मिसकेपछि सातौँ पटक छोरा जन्मिएको हो । “छोराभन्दा पछाडि फेरि एउटी छोरी जन्मिएकी छे”, उनले भने, “यो समाज छोरा जन्मेकामा उत्सव मनाउँछ, छोरी जन्मेकामा घृणा गर्छ । समाजकै लागि भए पनि छोरा खोजेको हुँ ।
छोराकै आसमा सात छोरी भए । बीचमा भाग्यवश जन्मेको यो छोरा बचाउन खुब प्रयन्त गर्दैछु ।” अहिले उनका छ छोरीको विवाह भइसकेको छ । कान्छी छोरी, एक छोरा र श्रीमती मात्र साथमा रहेका उनले बताए । उनले भने, “समयमै छोरा जन्मिएको भए लालनपालनमा राहत मिल्थ्यो होला । छोरी भए, अर्काको घर गए, एक्लो बनाए । अहिले सहाराविहीनझैँ छु ।”
कर्णाली प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले छोराको आसमा सात छोरी जन्माएका उहाँले एक्लो छोरा बचाउन गरेको हारगुहारले अस्पतालको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, “जङ्गली फल खाँदा त्यसको असर दिमागमा परेको देखियो । छोरो छटपटाउन थाल्यो । बाबु उपचारका लागि रोइकराइ गर्न थाले ।
तर बिहानै निको भएर छोरा बोल्न थालेपछि मुहारमा खुशी देखियो ।” सात छोरीको बीचमा जन्मिएको छोरो बिरामी हुँदा घरपरिवारमा निकै रुवावासी चलेको उनी बताउँछन् । “निको भएर घर फर्कुंला भन्ने आस थिएन”, बोगटीले भने, “अब छोरा निको भएपछि खुशीसाथ घर फर्कंदै छु । छोराको उपचार हुन नसकेको भए म घर फर्कने थिइनँ । अब खुशीका साथ फर्कन्छु, छोराले पुनःजन्म पायो ।”
२८ वर्षीया युवतीलाई ‘सेक्स एडिक्शन’का कारण डिप्रेसन, खोलिन् यस्तो रहस्य
प्रेमीसँग मिलेर आमाको हत्या
मुख्य समाचार, यस्तो पनि
‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा प्रेम नगर्ने र दाइजो माग्नेसँग विवाह नगर्ने भनेर शपथ खाएपछि…
घरमा २ श्रीमति हुँदाहुँदै गोप्य रुपमा विवाह गरिरहेका बेहुला मण्डपबाटै लखेटिए
सिन्धुलीमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले आफैँलाई गोली हाने
सर्पको खुट्टा यसकारण नहुने रहेछ, वैज्ञानिकहरुले सुल्झाए सदियौंदेखिको रहस्य
तपाईलाई थाहा छ बहादुर कोलम्बसको यो अर्को रुप ? पत्याउनै मुस्किल लुकेका यथार्थ
कोरोना भाइरस अमेरिकी षड्यन्त्र भएको चर्चा रुसभरि
छोडेर जाने श्रीमतिसँग बदला लिन छोराछोरीको हत्या
कोरोनाको त्रासः वैवाहिक समारोहमा कोही पनि आउन नमानेपछि …
कोरोना भाइरसको नाम सुन्ने बित्तिकै बलात्कारी भागे
२२ वर्षदेखि एउटै अध्यक्ष
जहाँ बिदा धेरै पाएपछि नागरिक असन्तुष्ट छन् …
रक्सी पिएपछि अंग्रेजी किन बोल्छन् मानिसहरु ?
संविधान संशोधन कार्यदलः ओलीले बजाएको ‘बेमौसमी बाजा’ गर्भमै तुहियो !
काठमाडौं, १२ फागुन । राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदल अहिले...
कलंकीमा ब्रेकफेल भएको ट्रकले ठक्कर दिँदा १ को मृत्यू, ४ घाइते
काठमाडौं, १२ फागुन । काठमाडौंको कलंकीनजिकै डुंगेअड्डामा सवारी दुर्घटना भएको छ । एउटा ब्रेक फेल भएको ट्रकले ९ वटा सवारी साधनलाई...